J: October 2007
True story - Hollowe’en ဆိုတဲ့ သရဲ
Hollowe’en ရောက်ပြီ ...ဆိုတဲ့ သရဲ ပွဲ
အဓိပတိကြီး ကိုရန်အောင် က သရဲအကြောင်းရေးဖို့ဆိုလာတော့ ရေးပြရတာပ။ ကိုယ်တွေ့ ထက် သူများတွေ့ဘဲများပါတယ်။ တကယ့် အဖြစ်ပျက်တွေ ကြားဘူးတာ ရေးထားတာပါ။
စာရေးသူတို့ရန်ကုန်က ကွန်ပျူတာ တကသိုလ်ကြီး ဟာ ၁၉၇၀လောက် ကစတည်ခဲ့ပါတယ် ချောင်ကျတဲ့ မြေမှာ တည်ရှိခဲ့သလို သင်္ချိုင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးသလို ပြောခဲ့ပါတယ် မဆန်းပါဘူး ဂျပန်ခေတ်မှာ အသတ်ခံရတဲ့ သူတွေ များမှများမဟုတ်လား။ တခုချင်း ခေါက်ထားတဲ့နေရာမှာ ရေးထားသဖြင့် သူရဲ ကြောက်သူများ ခေါက်ထားတဲ့ စာများ မဖတ်ပါနှင့်
ကျနော်လည်း ကြောက်တာဘဲဗျ ဟီး။ ဒါကြောင့် နံမည်ကြီးတဲ့ ဒီကျောင်းထဲ ခနွာကိုယ် တခုလုံး ၀င်ရောက်လာရင် စပြီး ဂါထာရွတ်သဗျ။ ဂါထာမှာ.
ကွန်ပ်သည် သရဲကြောက် တတ်ပါသည်။ အသင်သရဲတို့ အား ပြုသမျှ ကုသိုလ်ဝေပါသည်။ အသံ အရိပ်အယောင် လာမပြပါနှင့် အမျှ...အမျှ .. အမျှ...။ ဖြစ်ပါသည်။
မဟာသိပံစာမေးပွဲကြီး ရောက်လာပါပြီ စာရေးသူမှာ အပြင်းဖျားနေပါသည်။ စာမေးပွဲတွင်းတွင် ကျက်သော စာမှာ ၂ခုရောထွေးပြီး ပြီး မည်သည့်အဖြေကို ဖြေရမှန်းမသိသဖြင့် သရဲများ အား အကူညီတောင်းရပါသည်။
ကျွန်ပ်သည် က်ျကျောင်းတွင်ရှိသော အစောင့်ရှောက်များ ဖြစ်သည့် အသင်တို့ အား ကျောင်းဝင်းထဲ ကွန်ပ် ရောက်ရှိနေသမျှ ကုသိုလ်မျှဝေခဲ့သည်မှာ သင်တို့ အသိပါ။ ထပ်မံရ်ျ ကုသိုလ်ဝေပါသည်။ မည်သည့် အဖြေ မှန်သည်ကို ရွေးချယ် ပြန်လည် ကူညီပါ....ဟုဆိုပြီး အဖြေတခုကို စတင်ဖြေပါသည်။
ရုတ်တရက် မျက်ခန်းများ လှုပ်သွားပါသည်။ ချက်ချင်း ထိုအဖြေကို ခြစ်ပစ်ပြီး နောက် အဖြေကို ဖြေပါသည်။
စာမေးပွဲခန်းတွင်းမှ ထွက်လာသော အခါ အဖြေမှန်ကို ဖြေခဲ့ကြောင်း သရဲတို့ ၏ ကျေးဇူးအား အထူးတင်ရှိကြောင်း ယခုပို့ စ်ဖြင့် မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။ (သူတို့ လည်း ကျနော့်ရဲ့ မှတ်စုတွေ ဖတ်ပေးရပုံပေါ်တယ်။ ကျေးဇူးကမာပါ ၂ရက်ရထားသော ဥပုဒ်ကုသိုလ်များအမျှဝေပါသည် ကျေးဇူးရှင်များ နှင့် စာဖတ်သူများ အမျှ အမျှ အမျှ..)
ဌာနမှုးကြီး အခြောက်ခံရပြီးသည့်ချိန်မှ စရ်ျ နစ်စဉ်နစ်တိုင်း သင်္ကြန်တွင် ဒုလာဘရဟန်းပြုခြင်း အလျှုလုပ် အမျှဝေခြင်းလုပ်ရာမှ ၁၉ရာစုနစ် မကုန်ခင် သင်္ကြန် အလျှုတွင် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးမှာ တရားမဟောဘဲ ဆိတ်ဆိတ်ထိုင်နေသဖြင့် ဒုတိယကျောင်းထိုင်မှ တရားဟောခြင်းပြုခဲ့ရပါသည်။ နောက်ပိုင်းသိရသည်မှာ ဆရာတော်သည် ပရိသတ်ကြားတွင် ရှိသော မမြင်အပ်သော အရာက ကျွတ်လွတ်သွားကြောင်း လာရောက်နှုတ်ဆက်သဖြင့် ယင်းအား တရားဟောခြင်းပြုနေသောကြောင့် ဟုသိရပါသည်။ ၁.၁၁.၂၀၀၇
(ယခုပို့ စ်ကြောင့် ဖတ်သူအများ ထိပ်လန့်ရခြင်းကြောင့် စိတ်မကောင်းသဖြင့် အသေးစိတ် များပယ်ဖျက် ထားပါကြောင်း။)
- ကျနော်သည် ကားဒရိုင်ဘာဖြစ်ပါသည်။ ယခုဌာနသည် ၂၄နာရီ လုပ်ငန်း ဖြစ်သော်လည်း ဘတ်စကား မရောက်သဖြင့် ရုံးကားဖြင့် မြေနီကုန်း ဘတ်စကားမှတ်တိုင် သို့ အီးတူးတောင်စင်ဖြင့် အကြိုအပို့ လုပ်ပေးရ ပါသည်။ တညဘက် ရုတ်တရက် အချိန်ပို ညဆိုင်းဆင်းသူများအတွက် ညစာဝယ်ပေးပြီး အပြန် တကသိုလ် နား ကန်ဘောင် မှတ်တိုင် အရောက်တွင် မိန်းခလေးငယ်တဦး ကားကြုံစီးရန် အကူညီတောင်းသဖြင့် တင်ခေါ်ပေးခဲ့ပါသည်။ သို့ ဖြင့် ကွန်ပျုတာ တကသိုလ်နား ရောက် သောအခါ ထိုမိန်းခလေးအား မည်သည့်နေရာတွင် ချပေးရမည်နည်းဟု မေးရန် ကားနောက်ဖက် သို့ လှမ်းကြည့်သော အခါ. မည်သူမျှ မတွေ့ ရချေ။
- စက်ခန်းဌာန တွင်းမှ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ ထမင်းစုစားသည့် အရသာသည် အလွန်ထူးခြား လှပေသည်။ ထမင်း ဟင်းပိုထဲ့ကာ ဝေမျှ စားသောက်ကြပါသည်။ ညနေတိုင်း ထမင်းစုစားပြီး ပိုလျှံသမျှကို ကျောင်းဆောင် အပြင်ဘက် စားသောက်ဆိုင် သို့ သွားရာလမ်း လေးရှိ သစ်ပင်အောက်တွင် ခွေးကလေးများစားရန် သွန်ပစ်နေကြဖြစ်သည်။ တညနေတွင် ကျမတို့ မှာ အလုပ်ပြီးအောင် စောင့်ရသဖြင့် ၁နာရီခန့် နောက်ကျမှ ထမင်းစား ကြပါသည်။ ကျမမှာမူ ၁နာရီခွဲကျော်မှ ထမင်းစားထွက်လာရပါသည်။ အရင်ထွက်နှင့် ပြီးသူများ စားသောက်နေ ကြသည်ကိုလည်း မြင်ရသလို.... ကျမကဲ့သို့စားသောက်ဆိုင်သို့ လှမ်းကြည့်သော အရာကို သစ်ပင်လေးအောက်တွင် တွေ့ လိုက်ရပါသည်။ အပြာရောင် အရာကို မြင်ရသည်နှင့် ကျမလည်း ဆက်မကြည့်ရဲဘဲ သုတ်ခြေတင် အပြေးလေး သွားပြီး အဖေါ်များထံ သွားစုရပါသည်။
- ကျနော်တို့ ကွန်ပျုတာမှာ ပရိုဂရမ်ကို ပန့် ကဒ်ဖောက်ခြင်း အမှားစစ်ခြင်း ကဒ်ပြားများထဲ့ရ်ျ စက်တွက်ခြင်း အမှားစစ်ခြင်း အဖြေထွက်လာသည့် စာရွက်များစုခြင်း အမှားစစ်ခြင်း မှန်သော အဖြေများ ကို အုပ်စုခွဲရ်ျ သက်ဆိုင်ရာ စင်ပေါ်တင်ခြင်း။ စက်ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဖုံသုပ်ခြင်း မလိုသော ကဒ်များလွှင့်ပစ်ခြင်း လိုအပ်သော စာရွက်များ ထုပ်ပိုးသိမ်းရပါသည်။ ၂၄နာရီ အလုပ်ဖြစ်သဖြင့် ညဆိုင်းတွင်လည်း အလှည့်ကျ စားပွဲတခုတွင် အိပ်ကြရပါသည်။ ညဆိုင်းကျသောအချိန်တွင် ၃ယောက်လုပ် ၁ယောက်နား လုပ်ချိန်တွင် ကျနော်အလှည့်တွင် စိတ်ထဲ တမျိုးဖြစ်ရ်ျ အိပ်နေရင်းလန့်နိုးလာသဖြင့် မျက်စိဖွင့်လိုက်ရာ စားပွဲနှင့် ကပ်လျက် မှန်တံခါးကြီး တွင် .. ။ ည၂နာရီ ဘယ်သူမှ ရောက်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။
- ကျမသည် အလွန် ဘုရားတရားလုပ်သော အပျိုကြီးဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ ၏ဇတ်လမ်းများစွာ ကြားသိရသော်လည်း ကျမ မတွေ့ ခဲ့ရပါ။ တနေ့ လည် တွင် ရေအိမ်သို့ အသွား အရှည် ၁၀ပေခန့် ရှိ လက်မောင်းလုံးခန့် လုံးပတ်ရှိ စပါးကြီးမြွေကို ရေအိမ်တွင်းတွင် မမျှော်လင့်ဘဲ တွေ့ ရသဖြင့် လန့် ဖြန့် ကာ အော်ဟစ်ပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ပါသည်။ စက်ခန်းအတွင်းရှိ အမျိုးသားများ မြွေဖမ်းရန် အပြေးအလွှား ၀င်ရောက် လာသော အခါတွင် မည်သည့်အရာကိုမျှ မမြင်ရချေ။ ကျမမှာ ရိုးသားလွန်း ဘုရားတရားကြည်ညိုလွန်းသူ ဖြစ်ရ်ျသာ သူတို့ မှာ ကျမအား ယုံကြည်ပြီး မကြောက်ရန် ငိုယိုနေသော ကျမအား အားပေးကြပါသည်။
- ကျနော်မှာ အလွန် စာကြိုးစားသူ အလုပ်အလွန်လုပ်သူ ဌာနမှုးဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းတွင် နစ်တိုင်း ပထမဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သလို အလုပ်တွင်လည်း ရာထူးအမြင့်ဆုံးကို ရခဲ့ပါသည်။ တခါတရံ အိမ်သို့ ပင် မပြန်ဘဲ ညလုံးပေါက် ရုံးတွင် ထိုင်ကာ စီမံကိန်းအလုပ်များ ကျောင်းသားများ၏ မဟာသိပံစာတမ်းများဖတ်ရှု့ ခြင်း ကွန်ပျူတာပညာ အသစ်များလေ့လာခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်ပါသည်။ တညနေတွင် မြေညီထပ်ရှိ စက်ခန်းမှ ဒုတိယထပ်ရှိ ကျနော်၏ ရုံးခန်းသို့အ၀င် ကျနော်၏ စားပွဲပေါ်တွင် ......... မြင်လိုက်ရသဖြင့် ဆံပင်မွှေးများထောင်ကာ အော်ဟစ်ရ်ျ လူအများရှိရာ စက်ခန်းသို့့ဆင်းပြေးခဲ့ရပါသည်။ ထိုအချိန်မှ စရ်ျ ညဘက် အိမ်သာသွားလျှင် ချစ်လှစွာသော ချစ်ဇနီးကို ခေါ်ရ်ျ တံခါးဝတွင် အစောင့်ကြပ်လုပ်ခိုင်းရပါသည် ... သြော်သူက ၀တုတ်ကြီးဆိုတော့ အားရှိတာပေါ့ သရဲကို ပြန်ချနိုင်မှာ လေ.. ကျနော် ၀တာက သူ့ ကို မှ မမှီတာ..
True story - Love record
ဘလော့ကတဦး က ရင်ဘတ်မှတ်တမ်းတဲ့
ဒီတယောက်က တော့ ကျောမှတ်တမ်းပါတဲ့ ဗျား
အိမ်ထောင်သက် ၁၅နစ်မြောက် နေ့ မှာ ချစ်ရတဲ့ မိသားစုအတွက် မည်မျှ ချစ်ရကြောင်း ချစ်သက်သေ ပြရန် အချစ်များ ရင်တွင်း မဆန့် ဘဲ ကျောသို့ ဖောက်ထွက်သည့် အလား သက်သေ ပြလေသော Alan Jenkins သည် သက်ရှိ အရွယ် မိသားစု မျက်နာလေးများကို နာရီ၂၀ ကျော် အမေရိကန် ၁၇၀၀ မျှ အကုန်ခံရ်ျ စုတ်မင် ထိုး သက်သေပြခဲ့သည်။ ဇနီးသည် Lisa, 36 years, Daniella, 10 years, and Jade, 15 years နှင့် အချစ်ဘုရင်ကြီး Alan.
နောက်ကျောမှတ်တမ်း ရေးထိုးသူအကြောင်း ဆက်ပြောရရ်ျ လက်ကိုင်ပုဝါ ဆောင်ထားကြပါ။
အထက်ဖေါ်ပြပါ ပုံ ကို အိမ်ထောင်သက် ၁၅နစ်မြောက်နေ့ တွင် ရိုက်ကူးပြီး နောက်တရက်တွင် ဇနီးသည်က ပြောသည်မှာ
၂၅နစ်အရွယ် အားကစား ဆရာ Latvian နှင့် ဖောက်ပြန်နေကြောင်း မကြာခင် လက်ရှိ အိမ်ထောင် ကို ကွာရှင်းပြတ်စဲ ပြီး လင်ငယ်နောက် သွားနေမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်လေသည်။
အချစ်ဘုရင်ကြီးမှာ ရင်နာနာဖြင့် ခွင့်ပြုလိုက်လေသည်. သူအား စွန့် ခွာသွားသော်လည်း သူ၏ အချစ်များ မပြယ်သလို ချစ်ဇနီးသည်အား သူ့ ကျောတွင် အသက်ဆုံးတိုင် ထားရှိသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့လေသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ကိုဆိုးသွမ်း ၏ မှတ်ချက်မှာ မလုံလောက်ပါပေ။ အကြောင်းမှာ အရှေ့ တိုင်းနှင့် အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှု့ စရိုက် မတူသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ သော အကြောင်းများမှာ နေ့ စဉ်နှင့်အမျှ ဖြစ်ပေါ် နေပါသည်။ ၈၅% အနောက် နိုင်ငံသားများသည် အတွေ့ အထိသာယာမှု့ ကို သာ ဦးစားပေးသဖြင့် အနောက် နိုင်ငံ အိမ်ထောင်ရေး ကို စာရေးသူအနေဖြင့် ဝေဖန်ရလျှင် အဟိတ် တိရိစာန်ယဉ်ကျေးမှု့ ဟု ပင် ခေါ်ဆိုချင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ သားမက် က ယောက်ခမကို လက်ထပ်ရာတွင် မိန်းမ က သတို့ သမီးအရံ လုပ်ပေးခြင်း တချို့ မှာ ကလေး ဖခင်မည်သူ မည်ဝါမှန်း မသိခြင်း ...စသဖြင့် အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှု့ များ လွန်စွာ များနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
သို့ သော် တစ်လင် တစ်မယား.. ရိုးမြေကျ သစ်စာ ရှိရှိ ပေါင်းဖက်သော အိမ်ထောင်များလည်း တွေ့ နိုင်ပါသည်။ ရှားပါးသည် ဟု ထင်ပါသည်။ ထို သို့ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်သော ယဉ်ကျေးမှု့ များသည် အနောက်သာ မက အရှေ့ တိုင်းများတွင်ပါ ရှိလေသည်။
ရှေးဦးကျသော မြန်မာ အိနွိယ၊ သီဟို၊ ကမောဒီးယား၊ စသော မိဘ စံနစ် ကြီးသည့် မိသားစု(နိုင်ငံ) တွင်သာ သစ်စာရှိသော အိမ်ထောင်ဖက်များ ကို တွေ့ ရှိနိုင်မည်ဟု ယူဆ ရပါသည်။
News - Car Race or Kangaroo Race?
သားပိုက်ကောင် နှင့် ကားပြိုင်ပွဲ
၁၈လက်မ ပတ်လည် ခါးပိုင်ရှင်
ူသြစတြေးလျ နိုင်ငံတွင် ကျင်းပနေသော premier touring car race တွင် ကားများသာ မက သားပိုက်ကောင် ပင် လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း
ရုရှားနိုင်ငံ zoo in Stropkov တွင် မျိုးတုံးလုဆဲ ၂၃နစ် အရွယ် Siberian tiger ဆိုဒ်ဗေရီးယားကျား ကို လက်သည်း ညှပ်ပေးနေပုံ
ခါးကို လေတိုးရင် ကျိုးမှာ အလွန်စိုးတယ်
အသက် ၇၀အရွယ်ရှိ အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီး သည် ကမာပေါ်တွင် ခါး ပတ်လည် ၁၈လက်မ သာ ရှိသဖြင့် ဂျင်းန၀င်း ဘုတ်အုတ်ကြီး ထဲတွင် ပြိုင်စံရှား သရဖူးဆောင်းဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ခါးသေးအောင် ကော့ဆက်ဝတ်ရာမှ ထိုသို့သေးသွယ်သွားကြောင်း သိရသည်
အမွှာ ပါဘဲ ခက်တာက ခက်တာပါဘဲ ...
နဖူး ဂျိုပေါက်သော အသင်လူသား
တရုပ်ပြည်တွင် ရှိသော အဖွားအိုသည် ၂၀၀၁ ခုနစ်တွင် စတင်ပြီး နဖူးမှ အဖုအကြိတ် စထွက် လာပြီ အတော်အတန် ကြီးလာသည် ကို တွေ့ ရသည်။
ကလေးမှားခြင်းမှာ နေရာတိုင်းဘဲ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည် ၁၉၇၀ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကုလားလေးနှင့် ချင်းလေး ယောက်ျားလေး၂ဦးမှာ အရှေ့ ပိုင်း ဆေးရုံဆေးရုံတွင် မှားယွင်းခဲ့သည်၊ ချင်းလူမျိုး ဖခင်မှာ ဗေဒင်တွက်တတ် သောကြောင့် ကလေးမှားသည် ကို သိသဖြင့် သတင်းအမှန်ထွက်ပေါ်ခဲ့သည် ။ ကံဆိုးသည်မှာ ကလေးတဦး သေဆုံးခဲ့သဖြင့် ပြသနာ တက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုမှာ ကလေး၂ဦး မှားယွင်းပြီး မိခင်၂ဦးသို့ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ တနစ်ကြာသော အခါ ဖခင်တဦးက မသင်္ကာသဖြင့် ဆေးရုံသို့ သွားရောက် စုံစမ်းရမှ ကလေးမှားကြောင်း သိလာရသည်။ မိခင်၂ဦးမှာ သူတို့ ၏ ကလေး မဟုတ်မှန်းသိသော်လည်း ရင်အုပ်မကွာ ပြုစုခဲ့ရသဖြင့် သမီးအရင်းကို ပြန်လည် မယူချင်ကြပေ။ ကလေး အဖေများ မှာမူ သူတို့ ၏ သမီးအရင်း ကို ပြန်လည် ရယူချင်ကြသည်။
News - Wired world
မကောင်းမှု နှင့် တရားချိန်ခွင်
စည်းကမ်းပေါက်ဖျက်ရင် တရားမျှတနဲ့ စီရင်မှု့ ရှိသင့်တယ် ဒါကြောင့် လမ်းပိတ်ဆို့ မှု့ ဖြစ်ပွားစေသော က်ျ နွား ကြီးအား ထောင် ၆လ ကျခံစေ.
ပုံ ကမ်ဘောဒီးယား ရဲစခန်း
အဖြူရောင် ၁.၅ မီတာမြင့်သော ထိုနွားဖြုကြီး သည် လမ်းမအလယ် ပိတ်ဆို့ မှု့ ကြောင့် ၆၆နစ်အရွယ် မော်တော် ဆိုင်ကယ် အဖိုးကြီး က ယင်းနွားအား ၀င်တိုက်ပြီး သေဆုံး သွား သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုနွားဖြုကြီး သည် ၂၀၀၇ ခုနစ်ထဲတွင် လမ်းမတွင် လမ်းသလားမှု့ ကြောင့် ယဉ်တိုက်မှု့ များ ဖြစ်ပွားကာ လူ ၅ဦး သေဆုံးစေ ခဲ့သောကြောင့် ထိုသို့ တိုက်ပိတ်မှု့စီရင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ နွားပိုင်ရှင်မှာ သတိပေးခံရ သည်မှ အပ အရေးယူခံရခြင်း မရှိပေ။
(မှတ်ချက်။ ။ အပ မှီနေတယ် လို့ ထင်တာဘဲ၊ ဒီနွား ကြီးကို မသတ်ရင် လူတွေ ထပ်သေနေအုံးမယ် ထင်တယ်။)
မုန်လာနီနဲ့ မတဲ့သော ပျောက်ဆုံးနေသော ယုန်ကလေး
ပုံတွင်ပါရှိသော ယုန်ကလေးသည် ယင်းလှောင်အိမ်ထဲမှ အခိုးခံရပါသည်။ ယင်းသည် သစ်ရွက်နှင့် မုန်လာဥနီစားပါက ဖျားနာတတ်သဖြင့် အထူးစပါယ်ရှယ် ယုန်စာ ကျွေးရပါသည်။ ယုန်လေး၏ ပိုင်ရှင် ၁၀နစ်သမီးလေးမှာ အစားသောက်ပျက်ကာ ညစဉ်နီးပါး ညသန်းခေါင် တွင် ထယောင် ရ်ျ အော်ငို နေရှာသည်။ ယခုထိ မိဘ၂ပါးမှာ ယုန်လေး ပြန်တွေ့ ရန် ကြိုးစားဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးမလေး အား ဆင်းရဲသော သူများအား ယုန်ကလေး ကို ပေးထားကြောင်း ထိုသူတို့ မှာ သမီးလေးထက် ပိုရ်ျ ယုန်ကလေး အား ပြုစုကြောင်း ညာထား ရလေသည်။ ပြောရရင်....
မနက် က ၃၀မိနစ် အချိန်ရတာနဲ့ ရေးချင်စိတ်ပေါက်ပြီး ရေးနေတာ. နာရီ ကြည့်မိမှ အချိန်ကုန်မှန်းမသိ ကုန်နေတာ ၁၀မိနစ်တောင် နောက်ကျနေတယ်။ အိမ်ကနေ အလုပ်ထဲ ဘယ်လို ရောက်သွားမှန်း မသိအောင် ပြေးရသလား မမေးနဲ့ ။ ကံဆိုးချင်တော့ အလုပ်ထဲ အပြေး ၀င်ဝင်ချင်း မန်နေဂျာချုပ် နဲ့ မန်နေဂျာနဲ့မျက်နာချင်းဆိုင်တိုး တာဘဲ။ မတတ်နိုင်ဘူး ဘာထပ်ဖြစ်မလဲမသိဘူး မန်နေဂျာတွေ က သိပ်မကြည်ဘူး ။
ပို့ စ်ကို မနက်က အဆုံးမသတ်နိုင်သဖြင့် စူပွ စူပွ ဖြင့် မေတာပို့ သ သော စာမွ သူတို့ အား မေတာ ပေးရ်ျ အေးချမ်းစေပါသည်။ က်ျသို့ သော စိတ်စေတနာ ကြောင့် မန်နေဂျာတို့၏ အရစ်လုပ်ခံရခြင်း ကင်းပါစေသား